Emergency Assistance to the Republic of Zimbabwe in response to the Hailstorm Disaster
May 29, 2013 | Zimbabwe
TOKYO, Japan, May 29, 2013/African Press Organization (APO)/ -- On Friday, May 27, the Government of Japan decided to provide emergency relief goods worth 12 million yen (tents and blankets) to the Republic of Zimbabwe, through the Japan International Cooperation Agency (JICA) in response to the request following serious damage from the hailstorms. On Friday, May 27, the Government of Japan decided to provide emergency relief goods worth 12 million yen (tents and blankets) to the Republic of Zimbabwe, through the Japan International Cooperation Agency (JICA) in response to the request following serious damage from the hailstorms.
In Zimbabwe, hailstorms which occurred from the first week to the third week of April caused serious damage including destruction of household property. The International Organization for Migration (IOM) in Zimbabwe reported, as of May 22, three people were dead and approximately 25,000 people were evacuated to the shelter.
In response to the request from the Government of Zimbabwe, the Government of Japan has decided to provide emergency assistance from a humanitarian point of view for the victims as well as in light of friendly relations between Japan and Zimbabwe.